आज १६ आषाढ २०७७ मंगलवारको राशिफल « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
वडा अध्यक्षमा कोरोना देखिएपछि ५ नम्बर वडा कार्यालय र नगरपालिका ७ दिन सम्म शिल
लमही नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्ष सहित ६ जनामा कोरोना पुष्टि
अनुहार गोरो बनाउन आलुको रस
पहिरोमा पुरिएर गुल्मीमा २ जनाको मृत्यु , एक जना घाइते
दैनिक सुन्दर र आकर्षक बन्न गर्नुपर्ने कामहरु
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुखड खण्ड मर्मत हुदै
आज १६ आषाढ २०७७ मंगलवारको राशिफल
थाहा अनलाइन June 30, 2020 मा प्रकाशित
निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले हतारमा निर्णय नलिनुहोला। सहयोग जुटे पनि चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। अवसर प्राप्त भए पनि समयको महत्त्व नबुझ्नाले पछि परिनेछ। अध्ययनमा धेरै समय दिन नसकिएला। अरूको मुख ताक्ने बानीले पनि काम अधुरो रहनेछ। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुने समय भएकाले व्यवहारमा सजग रहनुपर्ला।
छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। स्रोत-साधन जुट्नाले नयाँ काम थालनी हुनेछ। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। रोकिएका काम बन्नाले थप काम गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका छ।
प्रयत्न गर्दा बोलीको भरमा कार्यसम्पादन हुनेछ। साथीभाइले साथ दिनेछन्। व्यापारमा विशेष लाभ मिल्नेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिने समय छ। मिहिनेतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।
कामको सफलताले आत्मविश्वास बढ्नेछ। आफन्तजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। घरमा अतिथिको आगमन हुनसक्छ। वस्त्र आभूषण जस्ता उपहार प्राप्त हुनेछन्। रमाइलो जमघटमा मन रमाउनेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। सानो प्रयत्नले पछिसम्म फाइदा हुने काम थालनी गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले सफलताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ।
-उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल
सत्य-तथ्य, खोजमुलक तथा नयाँ नयाँ रोचक भिडियोहरुका लागी (Thaha TV) थाहा टिभीलाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
गुल्मीको एक दलित परिवार मा तीन छाेरी नेपाल प्रहरीमा
घोडाघोडी नगरपालिकाले सबै वडामा प्राविधिकहरु खटाउने
बालुवाटारमा ओली-दाहालबीच भेट, के भयो कुराकानी ?
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ११ सय ५४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण
तिनै पुरुष : कोहि अभीभावक अनि कोहि राक्षस जस्ता